Fotoana famakiana: 6 minitra Milamina sy mahafinaritra. Teny roa izay tsy dia henonao matetika ampiasain'ny ray aman-dreny rehefa mitantara ny tantaram-pitsangatsanganany amin'ny zanany izy ireo. Noho izany, izahay dia nanapa-kevitra ny hanome anao ny toro-hevitra manan-danja indrindra amin'ny dia amin'ny lamasinina miaraka amin'ny ankizy any Eropa. Misy zavatra fotsiny momba ny lamasinina mampitony ny ankizy…
Fotoana famakiana: 4 minitra Firenena eoropeana tia mankalaza ny andro tsy fiasana ofisialy — indrindra fa ireo izay mahita be dia be mpizaha tany. Moa ve ianao mihevitra ny hahita ny anankiray amin'ireo firenena ireo mandritra ny andro tsy fiasana ofisialy? Raha izany, misy fomba maro mba hanatevin-daharana ny fety! Hanana fotoana mety koa ianao…
Fotoana famakiana: 5 minitra Divay nitsidika faritra any Eoropa dia nofy isaky ny divay connoisseur. Dia manapariaka tanim-boaloboka mahafinaritra, mafana sy talaky masoandro Weather, ny hilaza tehezan-kavoana, sady tsara sakafo hamaritra ireo faritra divay ambony. Raha mpitia divay ianao ary te hahita ny famokarana divay tsara indrindra any Eropa sy ny fomba…
Fotoana famakiana: 4 minitra Eoropa no malaza ankoatra ny hafa noho ny zavatra ara-tantara an'ireo trano sy monasitera izay manana zava-dehibe ara-tantara eto amin'izao tontolo izao. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World. Noravank,…